डेढ विगाह जमिनको धानबाली जंगली हात्तीले सखाप « Loktantrapost
झापा, १० असोज (रासस) । मेचीनगर नगरपालिका– १ का लालबहादुर मोक्तान फुल खेल्न थालेको धानबाली हेरेर मख्ख थिए । शुक्रवार दिनभर खेतमा फस्टाएको धान हेरेर खुशी हुँदै घर फर्किका उनी बर्षदिन खान पुग्ने धान फल्ने अनुमान गरे । तर, उनको खुशी भारतीय जंगली हात्तीले एकदिन पनि टिक्न दिएन ।
शुक्रवार राति १० कठ्ठा जमिनको धान हात्तीले खाएर र माडेर सखाप पारिदियो । उनले निरास हुँदै भने, “पाक्न लागेको बाली सखाप पारिदियो, अब के खाएर बाँच्नु ।” उनी मात्र होइन दैनिक भारतबाट हुल बाँधेर आउने हात्तीको उपद्रो बढ्न थालेपछि बाहुनडाँगीबासी चिन्तित छन् ।
उनकै छिमेकी रमेश भूँजेलको १० कठ्ठा, नन्द अधिकारीको पाँच कठ्ठा, कैलाश भण्डारीको पाँच कठ्ठा गरी डेढ विगाह जमिनको धान एकै रातमा हात्तीले खाइदिएको छ । मेची नदीमा लगाइएको विद्युतीय तारबार भत्काएर भारतीय जंगली हात्तीले वस्ती पसेर दैनिक जसो उपद्रो मच्याउन थालेका छन् ।
हात्ती छेक्न वि.सं. २०७२ सालमा विश्व बैंकको सहयोगमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले मेची नदी किनारमा १८ किलोमिटर क्षेत्रमा विद्युतीय तारबार लगाएको थियो । सोही तारवारका कारण आठ बर्षसम्म ढुक्कले निदाएका बाहुनडाँगीबासी हात्ती गाउँपस्न थालेपछि रातभर जाग्राम बस्न थालेको स्थानीयबासी शंकर लुईटेलले बताए । “ज्यान जोगाउनै मुश्किल छ”, उनले भने “खै कसरी पाक्न लागेको अन्नवाली जोगाउनु अब ।”
विद्युतीय तारबारको उचित मर्मत सम्भार नुहँदा दैनिक जसो भारतीय जंगली हात्तीले भत्काएर नेपाल प्रवेश गर्न थालेका छन् । प्रवेश गर्ने हात्तीले मेचीनगर १, २, ३ र ४ मा बढी दुःख दिइरहेको उनको भनाई छ ।
जिल्लाका बुद्धशान्ति गाउँपालिका,भद्रपुर, कनकाई र दमक नगरपालिकामा पनि हात्तीले दुःख दिइरहेको छ । अन्नवालीमा खाइदिए वा घर भत्काएमा डिभिजन वन कार्यालयले रु. १० हजार क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ । तर सो क्षतिपूर्ति पाउनका लागि लामो समय कुर्न पर्ने र पटकपटक कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाबाट धिक्क भएका हात्ती पीडितहरुले निवेदन नै दिन छोडेको मेचीनगर–३ का स्थानीय राजीव माझीले बताए ।